– အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံနိုင်ငံများအသင်း (ASEAN) ရဲ့ ပဋိညာဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပြည်တွင်… – PVTV Myanmar
·9months ago ·17 Comments
– အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံနိုင်ငံများအသင်း (ASEAN) ရဲ့ ပဋိညာဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုရဘူးဆိုတဲ့ မူဟာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက ဆိုးရွားတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့အပြင် ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ကိစ္စသာ ဖြစ်လို့ ပြည်တွင်းရေးသက်သက်လို့ ယူဆလို့မရတော့ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက တနင်္လာနေ့ ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) ကို အသိအမှတ်ပြုရမယ်လို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီး တစ်ခုဖြစ်တဲ့ International Trade Union Confederation (ITUC) က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ITUC ဟာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၆၀ ကျော်က အလုပ်သမားပေါင်း ၂၀၇ သန်းကျော်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အလုပ်သမား သမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကြီး ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) ဖွဲ့စည်းခဲ့တာကို ITUC က ကြိုဆိုကြောင်း ဧပြီလ ၁၉ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးအပါအဝင် နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေရော၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း တွေကပါ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တဲ့ NUG ကို အသိအမှတ်ပြုကြဖို့လည်း ITUC က တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
စတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူ ယနေ့ည PVTV သတင်း ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ကို တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 15K Share – 2155
2021-04-20 at 10:10 PM
ကြိုဆိုတဲ့ သတင်းကောင်းကတော့ ဆက်တိုက် ပဲ ဝမ်းသာပါတယ်
Salai Mang Te says:
2021-04-20 at 10:19 PM
2021-04-21 at 12:47 AM
2021-04-21 at 12:53 AM
Dw An says:
2021-04-21 at 7:16 AM
အသိမှတ်လဲ ြပ ုတယ်
ြကိုလဲ ြကိ ုဆိုတယ်
2021-04-21 at 8:31 AM
NUG ကို အားပေးတယ်
လူကြီး တွေဆိုတာ ယုံကြည် တယ်
We support CRPH & NUG.
2021-04-23 at 1:23 PM
NUG is the only legitimate government in Myanmar.
We fully support NUG.
2021-04-26 at 11:01 PM
Har har ဟား ဟား ား ဝါးးဟားးား ား ား ား႐ွက္စရာႀကီးဟာ
2021-07-20 at 8:56 PM
2021-07-28 at 10:23 AM
ထာဝရ စာေပ says:
2021-08-10 at 3:48 PM
2021-08-27 at 10:15 AM
2021-09-05 at 7:57 AM